Jordania · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Jordania · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Jordania tamin'ny Janoary, 2011
Arabia Saodita 30 Janoary 2011
Ejipta 29 Janoary 2011
Amerika Avaratra 24 Janoary 2011
Jordania: Fanehoan-kevitra noho ny fanalàna an'i Ben Ali avy amin'ireo ‘Jordaniana Tezitra’
Tonizia 18 Janoary 2011
Ry zareo Jordaniana, izay nanao ny "Andron'ny Hatezeran"-dry zareo tamin'ny andro nandosiran'ny Filohan'i Tonizia, Zine El Abidine Ben Ali, ny fireneny taorian'ny fanoherana efa naharitra am-bolana maro, dia naneho hevitra an-karavoana nandray ilay vaovao. Ry zareo koa dia manohitra ny sondro-bidy sy ny adin-tsaina ateraky ny ara-toekarena tsy mandroso tsy mihemotra.
Liban: manohana ny fanoherana ny “Pinochet Arabo” ny mpitoraka bilaogy
Bahrain 17 Janoary 2011
Niray feo tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Tonizia izay araka ny heno hatreto aloha dia olona 24 no maty ireo mpitoraka bilaogy any Liban. Fanehoana fiaraha-miory sy fanohanana ny tanora avy any Tonizia izay manohitra ny jadona sy ny kolikoly ary ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny filoha Zine el Abidine ben Ali,...
Tonizia 14 Janoary 2011
Arakaraky ny itohizan'ny herisetra, dia toy izany koa ny valin-kafatra sy ny fanehoan-kevitra ao Jordana. Maro ireo Jordaniana mpampiasa twitter no nifantoka tamin'ny fanakianana ny Filohan'i Tonizia , Zine El Abidine Ben Ali. Ny hafa mihevitra fa ny korontana mitranga any Tonizia dia hanome hevitra ny vahoaka any amin'ny firenena Arabo hafa hangataka fanavaozana ara-toekarena sy ara-politika.
Jordania: Fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter mikasika ny fisondrotan'ny Solika Sivy Isan-Jato
Toekarena sy Fandraharahàna 02 Janoary 2011
Nanambara ny fitsaharan'ny fiakaram-bidin'ny solika nandritra ny faran'ny taona ny governemanta Jordaniana. Ny vidin'ny entona fandrehitra, raha alaina ho ohatra ny benzine, dia niakatra 9 isan-jato, raha 6 isan-jato kosa ho an'ny vidin'ny gazole sy ny kerosene. Maro ny Jordaniana no naneho ny tsy hafalian-dry zareo tamin'ny alalan'ny esoeso manafintohina sy mahadrohadro.
Jordania: Fifandonana nanaraka ny fifidianana tao amin'ny Anjerimanontolo
Fanabeazana 02 Janoary 2011
Ny 21 Desambra 2010 teo dia nampanao fifidianana ny ho governemantan'ny mpianatra ao aminy ny Anjerimanontolon'i Jordania. Noho ny fisian'ny tatitra momba ny herisetra sy tsy fetezan-javatra nandritra ny fifidianana, namoaka fanambaràna haingana ny Anjerimanontolo manohitra ny filazana fa hoe nisy korontana. Herinandro roa latsaka taty aoriana, mbola nisy korontana hafa indray nitranga.
Jordania: Afaho i Taher Nassar!
Fahalalahàna miteny 02 Janoary 2011
Tahir Nassar, mpisolovava iray sady kandida nirotsaka hofidiana tao amin'ny antenimiera, dia nosamborina sy notànana any am-ponja Jordaniana noho ny fiampangana azy ho "nihantsy ady eo amin'ny sekta." Ny helok'i Nassar dia ny fandaharan'asam-pifidianany izay mampibaribary ny fanavakavahana mianjady amin'ireo Jordaniana manana fiaviana Palestiana. Naneho hevitra manodidina ilay vaovao ireo mponin'ny aterineto.